‘कानुन विपरित कवाडी ठेक्का’, गोपाल गुरुङलाई होला त कारवाही ? – Tandav News
ताण्डव न्यूज द्वारा	 २०७७ श्रावण २ गते शुक्रबार १६:४० मा प्रकाशित
पोखरामा महागरापालिकाले दिएको कवाडी निकासी कर ठेक्काको विवाद अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान कार्यालयसम्म पुगेको छ । त्यस सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरु अख्तियारले तानेको छ । ठेक्का सम्बन्धी बोलपत्र मुल्यांकन समितिले दिएको राय विपरित कार्यपालिकाले निर्णय गरेपछि विवाद झन् चर्किएको हो ।
टेन्डरको लागत न्यूनतम दर मुल्यांकन नै त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै पुन लागत अनुमान निर्धारण गरी बोलपत्र आव्हान गर्न समितिले सिफारिस गरेका थियो । समितिको अनुसार यसरी त्रुटि भएपछि पुन बोलपत्र आव्हान गर्नुपर्छ नत्र कानुन विपरित हुन्छ । मुल कानुन भन्दा माथी रहेर पोखरा महानगरपालिका कार्यपालिकाले कदम चाल्नु गम्भिर गल्ती रहेको एक अधिकृतले बताए ।
यसरी सुरु भयो विवाद…
पोखरा महानगरपालिकाले कवाडी संकलन गर्न ठेक्का आह्वान गर्छ । सोही आह्वान अनुसार ६ वटा कम्पनीले ठेक्का हाल्छन् । पोखराकै शुभ जगदम्बा कन्सट्रक्सन एण्ड इन्जिनियरिङ कम्पनी प्रालिलाई ४ करोड ४६ लाखमा कवाडी निकासी कर ठेक्का पर्छ । सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेपनि राजस्वको विषयमा एउटा विवाद सिर्जना हुन्छ । तर त्यो विवाद कम्पनीका कारणले नभई महानगरपालिककै कम्जोरीले गर्दा भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
महानगरपालिकाले कुनै पनि ठेक्का आह्वान गर्दा न्यूनतम मूल्यांकनमा अघिल्लो वर्षको टेन्डरमा १० प्रतिशत थप गरी नयाँ टेन्डर आहवान गर्नु पर्छ । तर महानगरपालिकै लापरवाहीको कारणले त्यो दर रेट अर्थात थप्नु पर्ने प्रतिशत थपिएन । जसले गर्दा दुई वर्षको लागि दिएको टेन्डरमा करिब महानगरपालिकालाई करिब ३१ लाख रुपैँया घाटा पर्ने भयो ।
त्यही कुराले गर्दा महानगरपालिकाले राजश्व परामर्श समिति र कर्मचारीसँग राय पेश गर्न अनुरोध गरे । बोलपत्र मुल्यांकन समितिले अहिलेको ठेक्का कानुन विपरित भएको हुनाले यसलाई बदर गरेर नयाँ ठेक्का आह्वान गर्नु पर्ने राय पेश गर्छ ।
आगामी वर्षका लागि दिने ठेक्का भन्दा चालु अर्थिक बर्षको ठेक्का रकम बढि भएको पाइएपछि टेन्डरको लागत न्यूनतम दर मुल्यांकन नै त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै पुन लागत अनुमान निर्धारण गरी बोलपत्र आह्वान गर्न समितिले सिफारिस ग¥यो ।
समितिले २०७७ साल वैशाख १७ गते पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धुब्र कुमार पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कवाडी निकासी कर ठेक्का सम्बन्धी पुन प्रक्रियामा जान महानगरलाई सिफारिस गरेको थियो । विगतको कुरालाई समेत जोडर समितिले बैठक मार्फत आफ्नो राय पेश गरेको हो ।
समितिको बैठकले गरेको निर्णय
मेयरकै अगाडी कर्मचारी धम्काउने गोपाल गुरुङलाई होला त कारवाही ?
समितिले ठेक्का बदर गर्न सिफारिस पेश गरेको भन्ने कुरा गाईगुई बाहिर आएपछि पोखरा–१३ का गोपाल गुरुङ पोखरा महानगरपालिका पुग्छन् । मेयर मानबहादुर जिसी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धुब्र कुमार पोखरेल लगायतका कर्मचारी छलफल भएकै बेला प्रवेश गरी गुरुङले कवाडी निकासी कर सम्बन्धी कुरा गर्दै कर्मचारीलाई तथानाम बोल्दै ज्यान मार्ने धम्की दिए ।
त्यसपछि कर्मचारीले धम्काउने गोपाल गुरुङलाई कारवाही हुन पर्छ भन्दै मेयर सा’ब समक्ष उजुरी दिए । महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धुब्र कुमार पोखरेल, आर्थिक प्रशासन उपसचिव जयराम पौडेल, राजस्व प्रशासन शाखा प्रमुख गणेश पाण्डे, खरिद शाखा प्रमुख भेषराज शर्मा लगायतकाले हस्ताक्षर गरेर मेयरलाई पत्र दिए, तर अहिलेसम्म पनि गुरुङलाई कुनै कारवाही भएको छैन् ।
यती हुँदा पनि बोलपत्र मुल्यांकन समितिले दिएको सिफारिसलाई बेवास्ता गरि कार्यपालिकाको वैठकले ३१ लाख थप गरि ठेक्का सदर गर्यो । जुन कानुन विपरित रहेको समितिको ठहर छ । यसरी गैरकानुनी रुपमा ठेक्का दिएको भन्ने सूचना बाहिर आएपछि अहिले फाईल अख्तियार कार्यालयले तानेको छ । यस विषयमा फैसला हुन बाँकी छ ।
कर्मचारीले गोपाल गुरुङविरुद्ध दिएको उजुरी यसप्रकार छ
मिति २०७७/२/२३ गतेका दिन अन्दाजी २ः३० बजेको समयमा प्रमुख ज्यूको उपस्थितीमा बैठक बसी रहेको समयमा पोखरा १३ बाँझापाटन बस्ने गोपोल गुरुङ भन्ने ब्यक्ति प्रमुख ज्यूको कार्यकक्षभित्र प्रवेश गरी कवाडी निकासी कर सम्बन्धी आय ठेक्का सम्बन्धी नियम संगत कार्य गरिरहेको विषयलाई लिएर तथानाम गालीगलौज गरी ज्यान मार्ने धम्की दिई बाहिरबाट समायोजन भएका कर्मचारीलाई यस कार्यालयको माया नहुने, घुस खाएर कमाएर जाने भनि भ्रष्टचारको आरोप लगाई अपमानित गरेको हुँदा दोषी उपर छानविन गरी कारवाही गरिपाउँ । यस प्रकृतिले कार्यालयमा काम गर्ने वातावरण असहज बनाउने हुँदा यस प्रकारका प्रवृती विरुद्ध कानुनी कारवाही नभएमा कार्यलयका नियमित कार्य गर्न असहज हुने व्यहोरो समेत अनुरोध गर्दछौँ । साथै कार्यालयको आन्तरिक सूचना दिई धम्क्याउन दुरुत्साहन गर्ने कार्यालयका सम्बन्धित कर्मचारीलाइृ समेत छानविन गरी कारवाही गरिपाउँ भनि निवेदन पेश गर्दछौँ ।
सम्झैता गर्न तयार, गुरुङको कम्पनीसँग कुनै सम्बन्ध छैन : अधिकारी
प्रमुख, शुभ जगदम्बा कन्सट्रक्सन एण्ड इन्जिनियरिङ कम्पनी प्रालि
टेन्डर आह्वान गरेपछि मैले पनि टेन्डर हालेँ । मेरो कम्पनीसँग ४/५ जनाले पनि टेन्डर हालेका थिए । ४ करोड ४६ लाखमा टेन्डर मलाई प¥यो । टेन्डर परेपछि त्यो रकम कम भयो थप्नु पर्छ भनेर मलाई पत्र आयो । पत्र अनुसार मैले टेन्डर परेको रकममा ३१ लाख रुपैँया थप्नु पर्ने हुन्छ र म थप्न तयार पनि छु । बैंक ग्यारेन्टीको हकमा भने १५/२० दिनमा म दाखिला गर्छु र ४ महिनाको अग्रिम रकम दिनु पर्ने पैसा मैले हालिसकेको छु । अब फेरी नयाँ सम्झौता गर्न बाँकी छ । गोपाल गुरुङको हकमा भने मेरो संस्था र मसँग आवद्ध भएको व्यक्ति होइन् । कर्मचारीलाई धम्काएको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ अरु मलाई थाहा भएन् ।
गुरुङ विरुद्ध मेयरकहाँ उजुरी दिएका छौ : उपसचिव पौडेल
उपसचिव, आर्थिक प्रशासन शाखा
टेण्डर भइसकेपछि मुल्यांकन गर्ने क्रममा कम देखियो । रद्ध गरेर पुनः टेण्डर गर्ने कुरा भयो । के गर्ने भनेर छलफल भइरहेको बेला, एक ब्यक्ति आएर ठेक्का नदिनी भए पिट्छु लगायतका शब्द प्रयोग गर्नुभयो । कारवाही हुनुपर्छ भनेर मेयर सा‘ब कहाँ उजुरी दिएका छौँ । जहाँसम्म कवाडी ठेक्काको विषय छ त्यसमा हामीले पुनः बोलपत्र आह्वान गरेर प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने राय पेश गरेको छौँ ।
कार्यपालिका सर्वोच्च निकाय हो : भरतराज पौडेल
कार्यपालिकाले गरेको निर्णय नै मान्नु सबैले मान्नुपर्छ । घटी भएको जानकारी भयो । घटी गर्न मिल्दैन भनेर सिफारिश भइसकेपछि, ठेकेदारको भन्दा पनि कार्यालयको कमजोरी भयो । जति रकमले कम हुन आउँछ, त्यति थप्ने गरि उहाँलाई पत्राचार भएको छ ।
ब्यक्तिले के राय दियो भन्दा पनि समग्र संस्थाले के निर्णय गर्यो भन्ने हुन्छ । कार्यपालिका सर्वोच्च निकाय भएको हुनाले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई सबैले मान्नु पर्छ । कार्यपालिकाले घटी हुने गरि त निर्णय गरेकै छैन नि । यसलाई सहज रुपमा स्वीकार्नुपर्छ ।
कर्मचारीलाई धम्की दिनेलाई कारवाही हुन्छ : मेयर जिसी
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार टेण्डर गर्दा हेर्नुपर्ने थियो, एमाउन्ट सहित । सूचना निकाल्दा कमिकम्जोरी भयो । म्याद थप्दा हुने फाइदा हेर्यौ । १० थपेर म्याद थप्न आयो । खासै विवाद होइन, प्रक्रियागत त्रुटी हो । संस्थालाई हानी नोक्सानी पर्देन भने हामी अगाडी बढ्न सक्छौं ।
कर्मचारी थर्काएको विषय त्यति ठूलो होइन । जो ब्यक्तिले थर्काए, उनि टेण्डरसँग सम्बन्धीत ब्यक्ति होइनन् । आवेगमा आएर बोले र कर्मचारीहरुले उजुरी पनि दिएका छन् । हामीकहाँ इन्द्रेका बाउ चन्द्रे आएर थर्काउपछि डराउनेवाला छैनौं । कर्मचारीले दिएको उजुरी सम्बोधन हुन्छ । हामी कारवाही गर्छौँ ।
मेयरलाई थर्काउँछु भनेर गएको कर्मचारी परे : गोपाल गुरुङ
गोपाल गुरुङ, पाेखरा – १३
गाला फुट्ने गरि हान्छु भनेको हो । खास केही पनि होइन । कसैलाई पनि चिन्दैन मैले । मैले ब्यक्तिलाई भनेको हैन । म ठेकेदार पनि होइन । भ्रष्टाचार भाछ भन्ने सुनेर, चलखेल गर्न दिन भएन भनेर भन्न गएको हो । महानगरलाई घाटा हुन्छ भन्ने कुरा गरेको हो । मेयरलाई थर्काउँछु भनेर गको अब अरु कर्मचारीहरु रैछ त्यहाँ ।
थप ३ जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमितको संख्या ४५ पुग्याे
सांसदलाई दिएको ६ करोड संविधान विपरित !
अर्घाखाँचीमा असिनाले चुटेर १० वर्षीय बालकको मृत्यु